Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Pat Mills, Alyson Richards dia mitondra antsika ao anaty horohoro / Thriller 'The Retreat'
nosoratan'i Waylon Jordan Jona 8, 2021
Ny fialan-tsasatra nandefa sinema sy tamin'ny vidéo-tinady tamin'ny 21 Mey 2021. Ity tantara ity dia mitantara ny mpivady lesbiana iray izay eo amin'ny vatolampy izay mankany amin'ny trano kely any anaty ala ny fifandraisan'izy ireo hialana amin'ny ady. tafavoaka velona rehefa manomboka mihaza azy ireo ny vondrona mpamono olona mpitolona.
iHorror dia nanana fotoana hipetrahana miaraka amin'ny mpanoratra Alyson Richards sy ny talen'ny Pat Mills mba hiadian-kevitra momba ilay horonantsary, ary faly be daholo izy ireo naka anay tao ambadiky ny seho nasehon'izy ireo
Ho an'i Richards, toa ny tantara ho an'ny Ny fialan-tsasatra dia nitombo avy tamin'ny tena fiainana tamin'ny fomba iray taorian'ny nandehanany nanao dia niaraka tamin'ny vadiny tany amin'ny trano kely any anaty ala.
"Niarina tao izahay ary tsara tarehy ny zava-drehetra," hoy izy nanomboka. “Tsy mbola nahita ny mpampiantrano anay mihitsy izahay, fa nahatsapa ho toy ny nojerena foana. Handeha hitsangantsangana izahay ary hiverina ary hisy andiana lamba famaohana vaovao sy naoty kely manodidina ilay toerana. Nahazo karazana tsy nampoizina izy io. Nisy io hevitra io izay mazava fa misy olona eto ary mijery anay. Tsy mahita azy ireo isika. Amin'ny maha-vehivavy ahy sy amin'ny maha-vehivavy saro-pantarina ahy dia nanomboka nanjary paranoida aho. Toy ny hoe iza ireo olona ireo? Tian'izy ireo ve isika? Tsy tia antsika ve izy ireo? Dia nanomboka nihodina ny eritreritro ary teo no nanomboka ilay karazana hevitra. ”
Richards sy Mills dia te-hamorona horonantsary mampihoron-koditra nandritra ny fotoana ela ka tsy misy dikany ho an'ny talen-tserasera rehefa nilaza taminy momba ny heviny izy. Nanomboka nitily toerana izy ireo na dia niasa tamin'ny script aza ny mpanoratra ary nampiasa izay hitany mba hampahafantarana fotoana fohy tao anatin'ny tantara.
Amin'ny lafiny iray, izy ireo dia singa in-injeniera miverin-dàlana amin'ilay tantara, fomba fanao izay tsy mbola nataon'izy ireo teo aloha, saingy toa mety amin'ny sary ilay izy. Tsy izany ihany no nahasarika an'i Mills tamin'ilay tantara.
"Ny iray amin'ireo zavatra tena novaliko sy nanintona ahy dia ireo vehivavy pelaka roa ireo tsy mifampitady ary mifanampy tokoa," hoy izy. “Mampalahelo fa amin'ny endrika mampihoron-koditra dia mahita ny mifanohitra amin'izay izy. From Instinct fototra ny Fihenjanana ambony—Ireo no referansa taloha kokoa - mifamadika ny tarehin-tsoratra ary tiako ny hoe, 'Izany no toetran'ny pelaka ankehitriny.' Miditra amin'ny tontolo mampatahotra isika ary mila miantehitra sy mifanampy isika mba hiaina izany. ”
Ny sarimihetsika dia mitaingina mafy miaraka amin'ireo mpilalao manan-talenta ao anatin'izany i Sarah Allen (ny habakabaka) sy Tommie-Amber Pirie (Saina mitovy) amin'ny maha mpivady afovoany sy Aaron Ashmore (Locke & Key) amin'ny maha tompon'andraikitra ny vondrona izay mihaza azy ireo.
"Tsara dia tsara amin'ny sarimihetsika ny olon-drehetra," hoy i Mills. “Tianay sy Alyson ny hahatsapa fa tena mafy orina ny fampisehoana amin'ilay sarimihetsika. Tsy misy mahatsapa ho lehibe loatra na kely loatra. Mahatsapa tena marina momba ny marina amin'ny sehatra mahitsy izy io. Indrindra miaraka amin'i Tommie sy Sarah ho toy ny fifandraisana afovoany, tena tianay ny simikan'izy ireo. Nahatsiaro tena ho mpivady fotsiny izy ireo izay manan-danja taminay. ”
Miaraka amina mpilalao lehibe voahidy ao amin'ny toerany dia tsy maintsy nofaranan'ny ekipa ihany ny toerana. Mampalahelo fa tsy dia malama loatra ny fizotrany araka ny niriany. I Mills dia efa nanamboatra ny lisitra fitifirany ary ny cinematographer azy ireo dia nanomana drafitra hametrahana ny trano fonenany, mba handehanana mandritra ny 24 ora mahery alohan'ny hanombohana ny fitifirana. Nanery azy ireo hamorona izany ary faly kokoa tamin'ny toerana niavianany izy ireo tamin'ny farany noho ny fahatsapany fa niaraka tamin'ny toerana voalohany izy ireo.
Tamin'izany fotoana izany ny toetr'andro Ny fialan-tsasatra nanapa-kevitra ihany koa ny handray anjara.
"Ny tena mahaliana dia ny mandray ireo fanapahan-kevitra rehetra ireo rehefa manao horonantsary, nefa iharan'ny voina amin'ny tontolo iainana," hoy hatrany ny talen'ny. “Nametraka ity toetrandro fararano ity izahay ary avy eo antsasaky ny sarimihetsika nilatsaka ny oram-panala. Hosorantsika ny lanezy ary avy eo ataontsika ireo sary akaiky satria tsy afaka nampiseho ny tontolo iainana izahay satria toa an'i Bing Crosby Christmas Christmas toe-javatra. Soa ihany fa io no karazana mampihoron-koditra ary raha mahatsapa claustrophobic izy dia mety tsy maninona, saingy efa nikasa ny hanao an'izany rehetra izany aho. ”
Ary ankehitriny, taorian'ny asan'izy ireo rehetra, ny sarimihetsika dia efa nizotra nanatrika teo amin'ny mpijery ihany tamin'ny farany, fotoana mahafinaritra ho an'i Mills sy i Richards satria tsy afaka nampiantrano fandefasana sary niaraka tamin'ny mpijery noho ny fameperana Covid-19.
“Mampihomehy, nisy nanontany ahy tamin'ny resadresaka nifanaovana omaly, 'Ahoana no nahalalanao fa mandeha io?'” Hoy i Richards nihomehy. “Tahaka izany aho, izao. Ianao milaza izany. Hafa noho ny vadiko mieritreritra fa mahafinaritra. Ie, heveriko fa fanamby izany izao. Manomboka mahita tsikera mahafinaritra tonga izahay, ka nahafaly anay izany. ”
Ny fialan-tsasatra Azo hofaina amin'ny Amazon Prime, Vudu, AppleTV +, ary Fandango Now. Zahao ny tranofiara, ary ampahafantaro anay raha efa nahita ny sarimihetsika tamin'ny fanehoan-kevitra etsy ambany ianao!
Aaron AshmoreAlyson RichardsPat MillsSarah AllenNy fialan-tsasatraTommie-Amber PirieWaylon Jordan
Neil Gaiman dia manome tampon-tampon-tsoloky ny fampifanarahana ho avy an'i Netflix an'ny 'The Sandman'